Hot News-1 March 2012 - video.phpmyanmar.com
Hot News-1 March 2012
Posted By - Ko Ko - March 2, 2012
Kim Ha-neul, bra exposed in Hawaii picture "bare-skinned"
မင်းသမီး Kim Ha-neul ရဲ့ ယခင်က ပုံတွေဟာ ဖုံးဖုံးဖိဖိ တွေများ ပါတယ်။ Hawaii က ထုတ်တဲ့ Singles အမည် ရှိတဲ့ ဖေဖဝါရီ လ မဂ္ဂဇင်း မှာ မဖုံးမဖိ ပုံတွေ တော်တော် ပါလာတာ ထူးခြားစွာ တွေ့ရ ပါတယ်။
Source : Kim Ha-neul, bra exposed in Hawaii picture "bare-skinned"
Ko Ah-ra: 'Life Is Series of Challenges'
တတိယနေရာတက်ချိတ်တဲ့ Ko Ah-ra ရဲ့ရုပ်ရှင်
မင်းသမီး Ko Ah-ra ရဲ့ Pacemaker ရုပ်ရှင် ကားဟာ ပထမ နေ့မှာ တတိယ နေရာ ချိတ်ပါတယ်။ တနေ့ထဲမှာ ပြတဲ့ ရုပ်ရှင် များ အနက်၊ Hwang Jeong-min & Uhm Jung-hwa တို့ရဲ့ Dancing Queen က #1, Ahn Seong-gi ရဲ့ Unbowed က #2, Ko Ah-ra ရဲ့ Pacemaker က #3 နဲ့ Eom Tae-woong & Jeong Ryeo-won တို့ရဲ့ Never Ending Story က #4 နေရာ များမှာ ချိတ်ကြ ပါတယ်။
Source : Ko Ah-ra: 'Life Is Series of Challenges'
ဘုရားတရားလိုက်စားတဲ့ Kim Tae-hee
မင်းသမီး Kim Tae-hee ဟာ Roman Catholic ဘာသာဝင် ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားတရား လည်း တော်တော် လိုက်စား တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။ အခု တလော မင်းသမီး ဘုရား ဝတ်ပြု နေတဲ့ ပုံတွေ online မှာ အတော်ပျံ့ နေပါတယ်။
Source : Kim Tae-hee 'the legendary church girl'
ကိုးရီးယားသူနဲ့ထက်ထပ်တဲ့ youtube သူဋ္ဌေး
YouTube.com တည်ထောင် ခဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ US နိုင်ငံသား Steve Chen ဟာ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် Seoul's Yonsei University မှာ တက်ရောက် နေတဲ့ ကိုးရီးယား သူ Park Ji-hyun (36) နဲ့ အကြောင်း ပါခဲ့ရာ၊ သားတစ်ယောက် ထွန်းကား ခဲ့ပါတယ်။ ဇနီး မောင်နှံဟာ San Francisco မှာ နေထိုင် ကြပါတယ်။ Park Ji-hyun ရဲ့ အင်္ဂလိပ် နာမည်က Jamie Chen ဖြစ်ပါတယ်။
Source : YouTube Founder Married Korean Woman
Song Hye-kyo to work with
Zhang Hanyu in "Wicked Love"
ဒါရိုက်တာ John Woo ရဲ့ရုပ်ရှင်မှာ
သရုပ်ဆောင်မည့် Song Hye-kyo
မင်းသမီး Song Hye-kyo ဟာ တရုတ် မင်းသား Zhang Hanyu နဲ့ တွဲဖက်ပြီး နာမည်ကျော် ဒါရိုက်တာ John Woo ရိုက်ကူးမည့် Wicked Love အမည်ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင်မှာ ပါဝင် သရုပ်ဆောင် မယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Song Hye-kyo to work with Zhang Hanyu in "Wicked Love"
"The Sun and The Moon" gets a
39.8% rating, leading the pack
'လရောင်လွှမ်းသောအလွမ်းနေ' (The Sun and the Moon) ဇာတ်လမ်းတွဲ ရဲ့ rating ဟာ 40% ကျော်သွားပြီး၊ အလွန် လူကြိုက် များနေတယ် လို့သိရ ပါတယ်။
တစ်ချိန်ထဲ ပြနေတဲ့ Take Care of Us, Captain (SBS - ဝေဟင်ချစ်သူ) က rating 9.4% နဲ့ 2# Wild Romance (KBS) က rating 9.3% နဲ့ 3# နေရာမှာ ရှိနေ ပါတယ်။
"The Sun and The Moon" getsa39.8% rating, leading the pack
အဆိုတော် ရုပ်ရှင် မင်းသမီး Uhm Jung-hwa (43) က မကြာမှီက ထုတ်လွှင့် သွားတဲ့ Happy Together (KBS) အမည်ရှိ ရုပ်သံ အစီအစဉ် မှာ အောက်ပါ အတိုင် ပြောသွား ပါတယ်။
ကျွန်မ တွဲခဲ့တဲ့ သူနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်က လမ်းခွဲ ခဲ့ ပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ အချစ်သစ် ဟာ ၄-၅ နှစ်လောက် ငယ်ရင် ပိုကောင်း ပါမယ်။ ကျွန်မထက် ကြီးတဲ့ သူတွေက အခုဆိုရင် အိမ်ထောင် ကျကုန် ကြတာ များ ပါပြီး လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
Source : Uhm Jung-hwa prefersayounger boyfriend
Jeon Ji-hyeon လက်ထပ်တော့မည်
မင်းသမီး Jeon Ji-hyeon ဟာ နာမည်ကျော် ကိုးရီးယား ရိုးရာ အဝတ် ဒီဇိုင်နာ Lee Yeong-hee ရဲ့ မြေးဖြစ်သူနဲ့ လာမည့် ဇွန်လမှာ လက်ထပ်ကြ မှာဖြစ် ပါတယ်။
မင်္ဂလာ ရက်ကို မင်းသမီး လက်ရှိ ရိုက်နေတဲ့ ရုပ်ရှင် Berlin အပြီးမှာ လုပ်ဖို့ ချိန်ကိုက် ထားတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
နှစ်ဦး စလုံးဟာ ၁၉၈၁ ခုနှစ်မှာ မွေးဖွား ခဲ့ကြပြီး၊ အသက် ၂၀ အရွယ်လောက် ထဲက ခင်မင် လာခဲ့ကြ သူများ ဖြစ်ကြ ပါတယ်။
Source : Jeon Ji-hyeon to get married in June
Han Ji-won နဲ့ Lee Seung-gi
မင်းသမီး Han Ji-won နဲ့ မင်းသား Lee Seung-gi တို့ဟာ၊ MBC ရုပ်သံက မကြာမှီ ထုတ်လွှင့်မဲ့ The King အမည်ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာပါဝင် သရုပ်ဆောင် ကြမယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Ha Ji-won and Lee Seung-gi to star in "The King"
Micky Yoochun and Han Ji-min cast
in new SBS drama "Rooftop Prince"
မင်းသား Micky Yoochun နဲ့ မင်းသမီး
Han Ji-min တို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲအသစ်
မင်းသား Micky Yoochun နဲ့ မင်းသမီး Han Ji-min တို့ဟာ SBS ရုပ်သံမှ တင်ဆက်မဲ့ The Rooftop Prince အမည်ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာပါဝင် သရုပ်ဆောင် ကြမယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
ရှေး Joseon ခေတ်က အိမ်ရှေ့စံ မင်းသား တစ်ပါးဟာ၊ ၄င်းရဲ့ ကြင်ယာတော် ပျောက်ဆုံး သွားတဲ့ အတွက်၊ ၂၁ ရာစုနှစ် သို့ time travel လုပ်လိုက် လာတဲ့ အချစ် ဇာတ်လမ်းတွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Micky Yoochun and Han Ji-min cast in new SBS drama "Rooftop Prince"
Lee Byeong-Heon Praised by Hollywood Co-star
Lee Byeong-Heon နဲ့
ဟောလီဝုဒ် ရုပ်ရှင် G.I. Joe 2
ဟောလီးဝုဒ် ရုပ်ရှင် G.I. Joe2ရဲ့ ခေါင်းဆောင် မင်းသား Dwayne Johnson မှ တွဲဖက် သရုပ်ဆောင် ကိုးရီးယား မင်းသား Lee Byeong-Heon အကြောင်းကို သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာ အကျယ်တဝင့် ထုတ်ဖေါ် ချီးကျူး သွားခဲ့ ပါတယ်။
Lee Byeong-Heon ဟာ action ပိုင်းမှာ အလွန်တော် တဲ့အပြင်၊ သရုပ်ဆောင် ပိုင်းမှာလည်း အလွန် အရည်အချင်း ပြည့်ဝ ပါတယ်လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
Source : Lee Byeong-Heon Praised by Hollywood Co-star
Lee Min-ho program reaches
record-high viewer ratings in China
F4 မင်းသား Lee Min-ho တရုတ်ပြည်
တရုတ်နိုင်ငံ ရုပ်သံ အစီအစဉ် မှလွှင့်ထုတ်တဲ့ "Que Rak Dae Bon Young" (Happy Camp) အမည်ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ F4 မင်းသား Lee Min-ho ပါဝင် ခဲ့ရာမှာ ၂ နှစ်အတွင်း rating အများဆုံး ရရှိ ခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Online မှာလည်း ၄င်း အစီအစဉ် ကို ဝင်ရောက် ကြည့်ရှုသူ ၁၀သန်း ကျော်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Producer ကတော့ မင်းသား Lee Min-ho ကြောင့် ၄င်းရဲ့ အစီအစဉ် ဟာ တရုတ်မှာ နံပါတ် ၁ ဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ် လို့ ပြောသွား ပါတယ်။
Source : Lee Min-ho program reaches record-high viewer ratings in China
'Boxing Actress' Lee Hopes to
Take on More Action-Packed Roles
မင်းသမီး Lee Si-yeong
လွန်ခဲ့တဲ့ ၄နှစ် ကသရုပ်ဆောင် လောကကို ခြေချ ခဲ့တဲ့ မင်းသမီး Lee Si-yeong ဟာ action မင်းသမီး တစ်လက် အဖြစ် ပေါ်ထွက် လာတာ တွေ့ရ ပါတယ်။
Feb 23 ကပြလို့ ပြီးသွားတဲ့ Wild Romance (KBS2, 2012) ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ကိုယ်ရံတော် အဖြစ် ပါဝင် ခဲ့ပြီး၊ Poseidon (KBS2, 2011) ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ကမ်းခြေစောင့် ကွန်မန်ဒို အဖြစ် ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။
မင်းသမီး ဟာ ၂၀၁၁ မတ်လ ကိုးရီးယား National Amateur Boxing Championships ရဲ့ ၄၈ ကီလို တန်းမှာ ဗိုလ်စွဲ ခဲ့လို့ တော်တော် သတင်း ကြီးခဲ့ ပါသေးတယ်။
Source : 'Boxing Actress' Lee Hopes to Take on More Action-Packed Roles
မင်းသမီး Son Ye-jin ရဲ့မွေးနေ့ပွဲ
မင်းသမီး Son Ye-jin ဟာ fan ၂၀၀ ကျော်နဲ့ ၄င်းရဲ့ ၃၁ နှစ်မြောက် မွေးနေ့ ကိုကျင်းပ ခဲ့ပါတယ်။ မကြာမှီက ၄င်း သရုပ်ဆောင် ခဲ့တဲ့ Personal Taste အမည်ရှိ ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ဝတ်ခဲ့တဲ့ အဝတ်အစား အချို့ကို မွေးနေ့ပွဲ မှာ fan များသို့ မဲဖေါက် ဝေငှ ခဲ့ ပါတယ်။
Source : Son Ye-jin Spends Her Birthday with Fans
ထိုင်ဝမ်မှာ 1# ရခဲ့တဲ့ Super Junior
Super Junior အဆိုအဖွဲ့ရဲ့ သီချင်း album များ ဖြစ်ကြတဲ့ Bonamana နဲ့ Mr. Simple တို့ဟာ ထိုင်ဝမ် 2011 major music charts တွေမှာ ထိပ်ဆုံး ရောက်ခဲ့တယ်လို့ ထိုင်ဝမ် ဂီတ website KKBOX မှ ဖေါ်ပြ သွားတယ် လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : Super Junior Sweeps Music Charts in Taiwan
Moon Geun-yeong postpones
graduation for work
မင်းသမီး Moon Geun-yeong
မင်းသမီး Moon Geun-yeong ဟာ ကျောင်းက သတ်မှတ်တဲ့ credits များ မပြေ့မှီလို့ ဘွဲ့ယူခြင်း ကိုရွှေ့ဆိုင်း ခဲ့ရတယ် လို့သိရ ပါတယ်။
မင်းသမီး ဟာ Sungkyunkwan University မှာ ၂၀၀၆ ခုနှစ်က စတင် တက်ရောက် ခဲ့ပါတယ်။ တက်ရောက် နေတဲ့ ဘာသာ ရပ်ကတော့ Korean Language and Literature ဖြစ်ပါတယ်။ ပွဲရိုက်ရက် များကြောင့် ကျောင်းပျက်ရက် များသွားလို့ အခုလို ဖြစ်ခဲ့ ရတာပါ။
Source : Moon Geun-yeong postpones graduation for work
Unconventional Artist Using
Pigs to Smash Stereotypes
ဝက်တွေနဲ့ ၁၀၄ နာရီအိပ်စက်ခြင်း
Kim Mi-ru (31) ဟာ New York မြို့မှာ ကိုယ်တုံးလုံး ချွတ်ပြီး ဝက်မှားနဲ့ ၁၀၄ နာရီ အိပ်စက် ခြင်းဖြင့် arts performances လုပ်ခဲ့တယ် လို့ဆိုပါတယ်။
သူမဟာ ကိုးရီးယား Wonkwang University မှ ပရောဖက်ဆာ Kim Young-oak (eccentric philosopher and professor of Wonkwang University) ရဲ့ သမီး ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော် ကတော့ "အင်း" လို့ပဲ ပြောချင် ပါတော့တယ်။
Source : Unconventional Artist Using Pigs to Smash Stereotypes
Hero's amazing amount of presents
အဆိုတော် မင်းသား Hero ဟာ ၄င်းရဲ့ fan များမှ ပေးပို့ လိုက်တဲ့ လက်ဆောင် များကို ဓါတ်ပုံ ရိုက်ပြီး twitter မှာ post လုပ်ခဲ့ ပါတယ်။ လက်ဆောင် တွေကတော့ အိတ်ကြီး တွေနဲ့ corridor အပြည့်ပါပဲ။
Source : Hero's amazing amount of presents
Kim Yoo-jeong grew up so fast!
မင်းသမီးလေး Kim Yoo-jeong
ခလေး သရုပ်ဆောင်လေး Kim Yoo-jeong (13) ဟာ အနုပညာ လောကကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှာ DMZ အမည် ရှိတဲ့ ရုပ်ရှင် နဲ့ စတင် ခဲ့ပါတယ်။
ကိုးရီးယား မှာပြသဆဲ 'လရောင်လွှမ်းသောအလွမ်းနေ' (The Sun and the Moon) ဇာတ်လမ်း တွဲမှာ ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး ငယ်ဘဝ အနေနဲ့ ရိုက်တဲ့ အခါမှာ ကြီးကောင် ဝင်နေ ပါပြီး။
သူ့ကို ပရိသတ် က တော်တော် ချစ်ကြ ပါတယ်။ မင်းသမီးလေး Kim Yoo-jeong ဆက်လက် အောင်မြင် ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေး အပ်ပါတယ်။
Source : "The Sun and The Moon" Kim Yoo-jeong grew up so fast!
Ha Ji-won heats up this spring with "Korea"
အခြားမင်းသမီးတွေအားကျကြတဲ့ Ha Ji-won
အက်ရှင် မင်းသမီး Ha Ji-won ကို အခြားမင်းသမီး များက အားကျကြ ပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်တိုင်က နာမည်ကြီး ပြီးဖြစ်တဲ့ မင်းသမီး Ko Ah-ra က "ကျွန်မ အစ်မ Ha Ji-won လိုဖြစ်ချင် ပါတယ်" လို့တွေ့ဆုံ ခန်းတစ်ခု မှာပြောသွား ပါတယ်။
Ha Ji-won ဟာ အလွန် ကြိုးစား ပါတယ်။ Hwangjin-i ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ၃မိနစ် ပဲပါတဲ့ ဇာတ် ဝင်ခန်း အတွက် ဟာ ရက်ပေါင်း များစွာ ကြိုးတန်းလျှောက် လေ့ကျင့် ခဲ့ပါတယ်။ Sector7ရုပ်ရှင် မှာပါတဲ့ ရိုက်ကွင်း အတွက် မော်တော် ဆိုင်ကယ်စီး ၁၀ ရက် လောက် လေ့ကျင့်ခဲ့ ပါတယ်။
ဒီကြိုးစား မှုတွေကြောင့် မင်းသမီဟာ ရုပ်ရှင် နဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲ တွေအဆက် မပြတ် ရိုက်နေ ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Ha Ji-won heats up this spring with "Korea"
မင်းသမီး UEE ကသိပ်လှတာပဲ
မေတ္တာစံအိမ် (Ojak Brothers - KSB2) ဇာတ်လမ်းတွဲ မှ မင်းသား Joo Won (25) က ခေါင်းဆောင် မင်းသမီး UEE (24) ကို "မင်းသမီးက အရမ်း လှတာပဲ" လို့ပြော မဆုံးအောင် ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Yonhap News မှ မင်းသား Joo Won ကို အင်တာဗျူး ရာမှာ ထိုကဲ့သို့ ပြောခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ Joo Won နဲ့ UEE ဟာ တစ်ကျောင်းထဲ ထွက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ "သူက ငယ်ငယ် ထဲက လှတာပါ" လို့လည်း ထပ်ပြော ပါသေးတယ်။
UEE ဟာ "အဆုံးသတ်ရိုက်ချက်" ဇာတ်လမ်းတွဲ မှာ ဂေါက်သီးရိုက် မယ်လေး အဖြစ်နဲ့ မြန်မာ ပရိသတ် ရင်းနှီး ပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။
Source : Joo Won "UEE is so pretty"
T-ara and Davichi can't perform
in the U.S due to visa restrictions
ဗီဇာမေ့လို့ USA ပွဲပျက်သွားတဲ့ concert
San Francisco မှာ Jan 13 တွင် T-ara, Davichi အဖွဲ့ နဲ့ Yangpa တို့ရဲ့ concert လုပ်ဖို့ စီစဉ် ခဲ့ပါတယ်။ လက်မှတ် ၈၀၀၀ လည်း အကုန်ရောင်း ထားပြီးဖြစ် ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ agency က အဆိုတော် တွေအတွက် ဗီဇာ လျှောက်ဖို့ မေ့သွားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ (ရော --- မြတ်စွာဘုရာ -- ဖြစ်မှ ဖြစ်ရ ပလေ)
ပွဲခင်းမဲ့ USA ဘက်က အဖွဲ့ တွေနဲ့၊ ပွဲပြမဲ့ ကိုးရီးယား အေဂျင်စီ အကြား အော်ကြ ဟစ်ကြ တွေဖြစ် ကုန်ပါတယ်။ လောလော ဆယ်တော့ ပရိသတ် ကိုတောင်းပန် ထားပြီး ပွဲရက်ရွှေ့ထား ရတယ်လို့ သိရ ပါတယ်။
Source : T-ara and Davichi can't perform in the U.S due to visa restrictions
Actor Ko Soo to Exchange
Vows with Art Student
Ko Soo (34)
The bride Kim Hye Yeon (23)
မင်းသား Ko Soo လက်ထပ်ပြီး
မင်းသား Koo Soo (34) ဟာ Feb 17 ရက်နေ့က လက်ထပ် လိုက်ပါတယ်။ သတိုး သမီး ကတော့ သူ့ထက် ၁၁ နှစ် ငယ်တဲ့ ကောလိပ်ကျောင်း သူလေး Kim Hye Yeon (23) ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ နှစ်ဦးဟာ ၂၀၀၈ ထဲက တွေ့ဆုံ ချစ်ကြိုက် လာခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလင် ဒီမယား အိုအောင် မင်းအောင် ပေါင်သင်း ကြရပါစေ လို့ဆုတောင်း ပေအပ် ပါတယ်။
Source : Actor Ko Soo to Exchange Vows with Art Student
End of Article - Hot News-1 March 2012
Article Link - http://video.phpmyanmar.com/video/article/513/hot-news-1-march-2012
Rendering time 0.0277 sec